ဗေဒင်ဆိုင်ရာ စာစုများ . . .: March 2012
ဓာတ် (၄) ပါးနှင့် ဓာတု၊ မူလ၊ ဇီဝ
ဆရာဦးမြင့်လွင်၏ သိရီပတိဇာတာ အလုပ်အကိုင်နှင့်ပတ်သက်သော အဟောများ မှတ်စုတွင်
(၁) တေဇောဓာတု (၂) အာပေါဓာတု (၃) ၀ါယောဓာတု (၄) ပထ၀ီဓာတု
(၁) မူလတေဇော (၂) မူလအာပေါ (၃) မူလ၀ါယော (၄) မူလပထ၀ီ
(၁) ဇီဝတေဇော (၂) ဇီဝအာပေါ (၃) ဇီ၀၀ါယော (၄) ဇီဝပထ၀ီ
တေဇော (၃) မျိုး
တေဇော - လောင်ကျွမ်းစေ၊ ရင့်ကျက်စေ၊ နူးညံ့စေသော
မူလ - မြေပေါ်ရှိသစ်ပင်များ
အသက်ကိုဖြစ်စေသော အပူဓာတ်၊ ရှင်သန်မှုကိုဖြစ်စေသော အပူဓာတ်
အာပေါ (၃) မျိုး
အာပေါဓာတ်သည် ပျံ့နှံ့တတ်၊ ဖွဲ့စည်းတတ်၊ စိမ့်ယိုတတ်သောဓာတ်မျာ၊ ကော်စေး ကပ်မှု
မူလ - မြေပေါ်ရှိပစ္စည်းများ
အာပေါ - ဖွဲ့စည်းမှု
အာပေါဇီဝ - ဇီဝ(အသက်) + ယိုစီး + ပျံ့နှံ့ + စိမ့်ဝင် အသက်ရှင်သန်ကြီးထွားမှု အတွက် ဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စများ
၀ါယော (၃) မျိုး
အငွေ့ အနံ့အသက်နှင့် ပတ်သက်သော ဇာတ်သဘောတရား
၀ါယော - လှုပ်ရှားခြင်း + အသက်ရှင်သန်ကြီးထွားမှု (ဇီဝ) အသက်ရှင်သန်ကြီး ထွားမှုအတွက် ၀ါယောကိုအသုံးပြု။ (၀ါယောဓာတ်သည် အသက်ကို လျင်မြန်စွာ သတ်တတ်သည်)
ပထ၀ီ (၃) မျိုး
ပထ၀ီ - မာကျောခြင်း၊ ကြမ်းတမ်းခြင်း
ဇီဝ - အသက်ရှင်မှု
ပထ၀ီ - အစိုင်အခဲ
အသက်ရှင်မှုအတွက် အထောက်အကူပြုသော ပစ္စည်းများ စသည်ဖြင့်ဖော်ပြထား ပါသည်။
၀ါယောဓာတ် - သွားခြင်းလာရန်၊ လျင်မြန်စေလို၊ ၀ါယောကိုမူ၊ ဥာဏ်နှင့်ယူလော့။
တေဇောဓာတ် - ပူသည်တစ်ချက်၊ ကျက်သည်တခြား၊ ကျော်ကြားစေမှု၊ တေဇောပြုရှင့်။
အာပေါဓာတ် - ငြိမ်းမှုငြိမ်းစွာ၊ အေးရာအေးကြောင်း၊ ပြီးကောင်းသမှု၊ အာပေါပြုရှင့်။
ပထ၀ီဓာတ် - ကြီးမှုတစ်တန်း၊ ခိုက်ရန်တခြား၊ လှုပ်ရှားမရှိ၊ ငြိမ်းဘိစေမှု၊ ဆင်ခြင်ရှု၍သာ၊ ပြုလော့ပထ၀ီ စသည်ဖြင့် အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာဋီကာကြီး (တတိယတွဲ)တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
ဓာတ်နှစ်ပါး စသည်သည် ဓာတ်တစ်ပါးအားကြေနိုင်ကြောင်း
ပထ၀ီ၊ အာပေါ၊ တေဇော၊ ၀ါယော ဟူသော ဓာတ်လေးပါးတို့သည် သတ္တလောက၊ သင်္ခါရလောက၊ သြကာသလောက တည်းဟူသော လောကသုံးပါး၌ ထင်ရှားပြုပြင်သောကြောင့် ဓာတ်လေးပါးသည် ဓာတ်တစ်ပါးအား နိုင်ခြင်း၊ ရှုံးခြင်း၊ ရှင်ခြင်း၊ သေခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ကုန်သော အကြောင်းတို့သည် ရှိအပ်၏။
(၁) အာပေါ၊ ၀ါယော ဓာတ်နှစ်ပါးသည် ပထ၀ီဓာတ်ကိုကြေစေ၏။
(၂) ပထ၀ီ၊ ၀ါယော ဓာတ်နှစ်ပါးသည် အာပေါဓာတ်ကိုကြေစေ၏။
(၃) ပထ၀ီ၊ အာပေါ ဓာတ်နှစ်ပါးသည် တေဇောဓာတ်ကိုကြေစေ၏။
(၄) ပထ၀ီ၊ တေဇော ဓာတ်နှစ်ပါးသည် ၀ါယောဓာတ်ကိုကြေစေ၏။
(၅) ပထ၀ီ၊ တေဇော၊ ၀ါယော ဓာတ်သုံးပါးသည် ပါပလေးရပ်ဓာတ်တို့ကို ကြေစေ၏ဟု အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာဋီကာကြီး (တတိယတွဲ) တွင် ဆက်၍ဖော်ပြထားပါသည်။
- ပထ၀ီပျက်သော် အာပေါအားကြီးလာမည်။
- အာပေါပျက်သော် တေဇောအားကြီးလာမည်။
- တေဇောပျက်သော် ၀ါယောအားကြီးလာမည်။
- ဓာတ်လေးပါးပျက်သော် အာကာသအားကြီးလာမည်။
ပထ၀ီပျက်သော် ခွန်အားနည်းချည့်နဲ့၊ ချူချာ၊ မောပန်း၊ ကွေးဆန့်လွယ်မည်။
အာပေါပျက်သော် အသားအရေခြောက်ကပ်၊ ရွှင်လန်းကြည်လင်မှုမရှိခြင်း။
တေဇောပျက်သော် ချုံ့ ခြင်း၊ ချပ်ခြင်း၊ ပိန်ကပ်၊ နွမ်းနယ်ခြင်းရှိမည်။
၀ါယောပျက်သော် ရောင်ခြင်း၊ မောခြင်းဖြစ်မည်။
အာကာသပျက်သော် စက္ခုနြေ္ဒဖောက်ပြန်၊ ဦးခေါင်းစောင်း၊ ရုပ်ဆင်းမလှ ဖြစ်မည်။
ဆရာမိုးတားဦးထွန်းရှိန်၏ ဝေဒပညာနိဒါန်းကို ဇောတိသဒေ၀မဂ္ဂဇင်းတွင် အခန်းဆက်ဖော်ပြခဲ့ရာ ...
(၁) လေ (Jaiyu)၀ါယုသည် သပ္ပာယဖြစ်အောင်ပေါင်းစပ်ခြင်းကို ဖြစ်စေ၏။
ဥပမာဆိုသော် (Prana - Jaiyu) ပရာဏ (၀ါယု)သည် အသက်ဇီဝတစ်ခု၏ အဇ္ဈတ္တနှင့် ဗဟိဒ္ဓ(အတွင်းနှင့်အပြင်) လောကဓာတ်တို့ကို သပ္ပာယဖြစ်အောင် ၀င်လေထွက်လေဖြင့် ပေါင်းစပ်ပေး၏။ လေသည်ပကတိအားဖြင့် ငြိမ်ငြိမ် သက်သက် ရှိခဲ့၏။ မကြာခဏဆိုသလို ဆွဲရာသို့ ယိမ်းယိုင်ပါတတ်၏။ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ဘေးအန္တရာယ်ကြီးမားသည်အထိ မွှေနှောက်တတ်၏။ များသောအားဖြင့် ဖြည်းညင်းသာယာစွာ နေလေ့ရှိ၏။ လေတို့၏တိုးဝှေ့ရွေ့လျားခြင်းကို မမြင်ရ။ မည်သည့်နေရာမှာမဆို အကြီးမားဆုံးသော တိုးဝင်ထိုးဖောက်နိုင်သည့် စွမ်းအင်ရှိ၏။
(၂) မီး (သို့မဟုတ်) Agni အဂ္ဂနိသည် ရုပ်လုံးပုံပန်းသဏ္ဌာန် အပြောင်းအလွဲကို ဖြစ်စေ၏။ ရုပ်လုံးပေါ်အောင် ပုံလောင်း ရာတွင် အဂ္ဂိနိသည်သာ အခရာဖြစ်၏။ သူမပါက မပြီးချေ။ နာမ်ပိုင်းဆိုင်ရာ မြင့်မားရေး၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လွှမ်းမိုးရေး (သို့မဟုတ်) စိတ်ကူးဥာဏ်ညှစ်ထုတ်ရေးတို့၌ အဂ္ဂိနိသည်သာ အဓိကအားကိုးစရာဖြစ်၏။ မီးတွင် တစ်စုံတစ်ခု၏ အညစ်အကြေးကို လောင်ကျွမ်းစေတတ်သည့် သတ္တိရှိသဖြင့် စင်ကြယ်ခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်၏။ ခက်မာသောအရာဝတ္ထုကို နူးနူးညံ့ညံ့ အပြင်းအပျော့ဖြစ်အောင် ပြုပြင်နိုင်ခြင်းသည် ရုပ်လုံးပုံသဏ္ဌာန် အပြောင်းအလဲကို မီးဓာတ်၏သတ္တိဖြစ်၏။
(၃) ရေ (သို့မဟုတ်) ဇလ (အာပေါ)သည် ဓာတ်ငွေ့အရည်ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် ရေတွင်စီးဆင်းမှု (သို့မဟုတ်) ယိုစီးမှုသည် အခရာဖြစ်၏။ ၎င်းသည် တမဂုဏ Gamaguna နှင့်ယှဉ်သောအခါ ရုပ်နှင့်နာမ်တို့အပြိုင် ရုန်းကန်သည့် ဂမ္ဘီရ အတွေးအကြံများ ၀င်ရောက်စေတတ်၏။ သတွဂုဏ Sattuau Guna နှင့်ယှဉ်သောအခါ စိတ္တဗေဒကိုဖြစ်ပေါ်စေ၏။
(၄) မြေ (သို့မဟုတ်) Prthvi သည် ရုပ်ဒြပ်အထည်ကိုယ်များ (သို့မဟုတ်) ကိရိယာတန်ဆာများအပေါ်၌ ဧကဂ္ဂတာကျ အောင် အာရုံစူးစိုက်ခြင်းဖြစ်၏။ ခက်မာမှု၊ နူးညံ့မှု (သို့မဟုတ်) သိမ်မွေ့မှုကို အကြောင်း+အကျိုး ဆက်ကြံရာမှာ အာရုံစူး စိုက်ခြင်းသည်သာ အခရာဖြစ်၏။ အတွေးအကြံများကို ဘာသာစကားထဲမှ လိပ်ပတ်လည်အောင် ပိုင်ပိုင် နိုင်နိုင်သုံးသည့် စကားလုံးတို့ကို အကဲခတ်ခြင်းဖြင့် အမြဲမသွေ သိသာစေလျက် (နိမိတ်ပြ) အမှတ်လက္ခဏာတို့ဖြင့်လည်း ထင်ရှားပေါ်လွင်စေ၏။
Posted by aha at 8:48 AM0comments
Labels: ဟောဆိုမှု ပရိယာယ်များ
ဓာတ်လေးပါးကို လက်ဖ၀ါးပြင်နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိကြောင်းကို“ . . . .. ” ၏စာအုပ်တွင် ဖော်ပြထားသည်မှာ ...
(ဗေဒစိန္တာမယ) ဆရာဦးလှကြိုင်၏ 'ဖလိတစိန္တာမဏိကျမ်း' ပထမတွဲတွင်
မီး - မိဿ၊ သိဟ်၊ ဓနု
လေ - မေထုန်၊ တူ၊ ကုံ
မြေ - မကာရ၊ ပြိဿ၊ ကန်
ရေ - ကရကဋ်၊ ဗြိစ္ဆာ၊ မိန်
မြေ - ပြိဿ၊ ကန်၊ မကာရ
လေ - တူ၊ ကုံ၊ မေထုန်
မီး - မိဿ၊ သိမ်၊ ဓနု
အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမား၊ ဆရာနှင့်တပည့်၊ အဖေနှင့်သား၊ လင်နှင့်မယား တွဲဖက်ဟူသရွေ့ အချင်းချင်းသင့်မြတ်ခြင်း ရှိ, မရှိကို သိလိုလျှင် လဂ်နှင့်စန်းတို့သည် မည်သည့်ရာသီတို့ ရှိနေသည်ကို ဝေဖန်၍ဟောရမည်။
စန်းသည် စိတ်၏ ကာရကဂြိုဟ်ဖြစ်၏။ စန်းတည်သောရာသီတို့သည် အချင်းချင်းမိတ်ဖြစ်လျှင် ထိုသူတို့၏ စိတ်နေ သဘောထားသည် တိုက်ဆိုင်ခြင်းများတတ်သည်။ အကယ်၍ စန်းတည်သောရာသီတို့သည် အချင်းချင်း မိတ်မဖြစ်သော်လည်း လဂ်တည်သောရာသီအချင်းချင်း မိတ်ဖြစ်လျှင် တစ်ဦးအပေါ်တစ်ဦး မေတ္တာဓာတ်ရှိပြီးလျှင် စိတ်သဘော အယူအဆကွဲလွဲ တတ်၏။ သို့ရာတွင် တစ်ဦးလဂ်မှ တစ်ဦးလဂ်သည် ၆တန့်၊ ၈တန့်ဖြစ်လျှင် ရန်သူဖြစ်တတ်၏။ အနိုင်လုတတ်၏။
စန်းနှင့်လဂ် နှစ်မျိုးစလုံး ရာသီအချင်းချင်း ရန်ဖြစ်လျှင်လည်း တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး သင့်မြတ်ခြင်းမရှိချေ။ အတိုက်အခံ သဘော အမြဲရှိတတ်၏။ လဂ်အိမ်နှင့် စန်းအိမ်ရှင်ဂြိုဟ်တို့ တည်ရှိသောရာသီကလည်း ဝေဖန်၍ဟောရမည်ဟု ဖော်ပြထား ပါသည်။
မူလဓာတ်၊ မိတ်၊ ရန်၊ ဥဒါသိန်
ဇောတိသဝေဒမဂ္ဂဇင်းတွင် မင်းသစ်ကျော်(ဥဿာ)က ဖော်ပြထားသည်မှာ မိတ်၊ ရန်သာမကဘဲ ဥဒါသိန်ကိုပါ ထည့်သွင်း ထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
''မီးဓာတ်နှင့်လေ၊ မြေနှင့်ရေ၊ မိတ်ဆွေတော်ကြ၊ သဟာယ''
''မီးဓာတ်နှင့်ရေ၊ မြေနှင့်လေ၊ မိတ်ဆွေမစပ်၊ ပဋိယတ်'' ဟု ရေးမှတ်ကြပါသည်။
၁ ။ ပထ၀ီဓာတ်
(၁) အချစ်ရေး (၂) လက်ထပ်ရေး (၃) အိုးအိမ်ဆောက်လုပ်ရေး (၄) လက်ဝတ်လက်စားအသစ် ၀တ်ဆင်ရေး
၂ ။ အာပေါဓာတ်
(၁) အလုပ်အကိုင် (၂) ပညာရေး (၃) စာပေနှင့်ပတ်သက်သောကိစ္စများ
၃ ။ ၀ါယောဓာတ်
(၁) ကျန်းမာရေး (၂) ခရီးထွက်ခြင်းများ
၄ ။ တေဇောဓာတ်
(၁) မကောင်းမှုအကုသိုလ်လုပ်ခြင်း (၂) ဆင်းရဲဒုက္ခခံနိုင်ခြင်း (၃) လောင်းကစားခြင်း (၄) ကာမဂုဏ်ကိစ္စများ
၅ ။ အာကာသဓာတ်
(၁) ဥစ္စာပစ္စည်း (၂) အမွေပစ္စည်း (၃) ရှေးဟောင်းဝေဒကျမ်းများ၊ သိပ္ပံ-၀ိဇ္ဇာ သမိုင်းဝင်ပစ္စည်းများ (၄) ရေပေါ်ရေ အောက် မြေပေါ်မြေအောက်ရှိသော သဘာဝ ဓာတ်သတ္တုပစ္စည်းများ (၅) ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာ အမှတ်တရပစ္စည်းများ၊ အခွင့် အရေးများ စသည်ဖြင့် မင်းသစ်ကျော် (ဥဿာ)က ဖော်ပြရေးသားထားပါသည်။
ဆရာဝန်ဖေဥာဏ်၏ ''အနောက်တိုင်းနက္ခတ်ပညာ'' စာအုပ်တွင် ...
၁ ။ မီးနှင့်လေ အုပ်စုမျိုးသည် စိတ်လိုက်မာန်ပါခံစားမှုအတိုင်း လုပ်ဆောင်ကြသည်။
၂ ။ ရေနှင့်မြေ အုပ်စုသည် ခေါင်းအေးအေးဖြင့် ကြံစည်စဉ်းစားလုပ်ဆောင်ကြသည် ဟု ရေးသားထားပါသည်။
မူလဇာတာကို စစ်ဆေးသောအခါ၌ဖြစ်စေ၊ ကာလဇာတိကိုဟောသောအခါ၌ဖြစ်စေ၊ အားနည်းသောဂြိုဟ်၏ စိုးပိုင် သောဓာတ်ကိုကြည့်၍ ရောဂါဝေဒနာဖြစ်တတ်ကြောင်းကို ဟောနိုင်၏။
မီးနှင့်ပတ်သက်သောပစ္စည်းကိုလည်းကောင်း၊ မီးနှင့်သက်ဆိုင်သော စက်မှုလုပ်ငန်းကိုလည်းကောင်း၊ အဂ္ဂိရတ်ထိုးရာ ၌လည်းကောင်း အကျိုးပေးတတ်၏။ ပူအိုက်သောဒဏ်ကို ခံနိုင်စွမ်းရှိ၏။ မီးသတ်ဌာန၊ မီးရထားစက်ရုံ၊ မီးနှင့်ပတ်သက်သော ဌာနမှာလုပ်ကိုင်လျှင် အကျိုးပေး၏။
အေးသောဒဏ်ကိုခံနိုင်၏။ ရေကို ခဏခဏချိုးတတ်၏။ အေးသောရာသီကိုကြိုက်၏။ ရေမှ ပေါ်ထွက်သော ပစ္စည်း ကို ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ ရေကြောင်းခရီးဖြင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ခြင်း၊ ရေနှင့်ပြုလုပ်သော ပစ္စည်းတို့ကို လုပ်ကိုင်ရောင်းချခြင်း၊ လှေသမ္ဗန်၊ စက်လှေ၊ တုန်ကင်း၊ သင်္ဘောအစရှိသည့် ရေယာဉ်များနှင့် အကျိုးပေးတတ်၏။ ရေ၀န်ရုံး၊ သင်္ဘောကျင်းဌာန၊ ရေနှင့်နီးစပ်ရာလုပ်ငန်းများမှာလည်း အကျိုးပေးတတ်၏။
ဥယျာဉ်၊ ခြံ၊ လယ်ယာ၊ ကိုင်းကျွန်း အစရှိသည့် မြေနှင့်ပတ်သက်သောလုပ်ငန်း၊ သတ္တုတွင်းတူးခြင်းနှင့် ဘူမိဗေဒပညာ များကို ၀ါသနာပါ၏။ ကုန်းကြောင်းခရီးဖြင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ကောက်ပဲသီးနှံ ရောင်းဝယ်ရေးဌာန၊ လယ်ဝန်ရုံး နယ်ခြားအကောက်ဌာနများ၌ အကျိုးပေးတတ်၏။
သျှတ္တရပညာနှင့် နက္ခတ်ဗေဒင်ပညာကို ၀ါသနာပါတတ်၏။ ငှက်၊ တိရစ္ဆာန်ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ လေကြောင်းခရီး သယ် ယူပို့ဆောင်ရေးဌာန စသည်တို့ကို လုပ်ကိုင်ပါက အကျိုးပေးတတ်၏။ မိုးရာသီကို ကြိုက်နှစ်သက်၏။
လေကိုအသုံးပြုတတ်သောပညာ၊ ကြေးနန်း၊ တယ်လီဖုန်း၊ ရေဒီယိုအတတ်ပညာတို့ကို ၀ါသနာပါတတ်၏။ လေညင်း ခံလိုသော ၀ါသနာကြီး၏။ ဤအချက်များကို လဂ်စန်းစီးသောန၀င်းဂြိုဟ်တို့ကိုလည်းကောင်း၊ လဂ်စန်းအိမ်ရှင် န၀င်းစီးသော ဂြိုဟ်ကိုလည်းကောင်း အားကြီးရာကိုယူလေ။ အားချင်းတူလျှင်လည်း ဆိုင်ရာဓာတ်သဘာဝအတိုင်း အကျိုးကို အထိုက် အလျောက်ပေး၏။
အားနည်းသော အန္တရဒသာဂြိုဟ် ဒသာစားသောအခါ ပိုင်ဆိုင်ရာဓာတ်သဘာဝနှင့် လျော်ညီစွာလည်းကောင်း၊ ဂြိုဟ် တည်သောဘာဝနှင့် ဆိုင်ရာကိုယ်ခန္ဓာ အစိတ်အပိုင်းများမှာ ရောဂါဝေဒနာ ပေးတတ်၏။ ဆိုင်ရာအကျိုးများလည်း ပျက်စေ၏။
အားကြီးသော အန္တရဒသာစားလျှင် ပိုင်ဆိုင်သော ဓာတ်သဘာဝအားလျော်စွာ အထက်ပါအတိုင်း ဝေဖန်ပြီးလျှင် ကောင်းကျိုးပေးမည်ဟု ဟောနိုင်၏။
အားနည်းသောဂြိုဟ်သည် လဂ်စန်းပေါ်၌ ကောဇာအားဖြင့်လာစီးလျှင် စိုးပိုင်သောဓာတ်သဘာဝအလျောက် အားရှိ အားမဲ့ဝေဖန်၍ အဆိုးအကောင်း ဟောနိုင်၏။
Posted by aha at 6:32 AM0comments
မြန်မာနိုင်ငံ ဝေဒသုတေသနအဖွဲ့၏ အခြေခံဝေဒပညာ သိမှတ်စရာများစာအုပ်တွင် ရာသီ၏ဓာတ်ဟုဖော်ပြရာတွင် လေးပါးစုံရာသီ တေ၊ ပ၊ ၀ါ၊ အာ ဟုမှတ်သားကြ ပါသည်။
အဆင့်(၁)ဂဏိတပညာ ပို့ချချက်တွင် ဓာတ်လေးပါး၏ အာဒိ(အစ)အိမ်များနှင့် တေဇော၊ ပထ၀ီ၊ ၀ါယော၊ အာ ပေါဓာတ်အိမ်များကို သိမှတ်လွယ်ရန် ခွဲခြားဖော်ပြထားပါသည်။
အခြေခံဝေဒပညာ သိမှတ်စရာစာအုပ်တွင် ဂြိုဟ်တို့၏ဓာတ်သဘာဝကို တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်-မီး၊ တနင်္လာဂြိုဟ်-ရေ၊ အင်္ဂါဂြိုဟ် - မီး၊ ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ် - မြေ၊ ကြာသပတေးဂြိုဟ် - အာကာသ၊ သောကြာဂြိုဟ် - ရေ၊ စနေဂြိုဟ် - လေ စသည်ဖြင့်ဖော်ပြထား သည်။
ထိုနည်းတူ ဗြို့ဟတ်ဇာတကကျမ်းတွင် အင်္ဂါဂြိုဟ်သည် မီးကိုလည်းကောင်း၊ ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်သည် မြေကိုလည်းကောင်း၊ ကြာသပတေးဂြိုဟ်သည် အာကာသကောင်းကင်ကိုလည်းကောင်း၊ သောကြာဂြိုဟ်သည် ရေကိုလည်းကောင်း၊ စနေ ဂြိုဟ်သည် လေကိုလည်းကောင်း စိုးမိုး၏ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။
ပရာသရဟောရာသျှတ္တရ (ပတွဲ)တွင် မီးဓာတ်၊ မြေဓာတ်၊ အာကာသဓာတ်၊ ရေဓာတ်နှင့် လေဓာတ် စသည့် ဓာတ်ကြီး ငါးပါးကို အင်္ဂါဂြိုဟ်၊ ဗုဒ္ဓဟူးဂြိုဟ်၊ ကြာသပတေး ဂြိုဟ်၊ သောကြာဂြိုဟ်နှင့် စနေဂြိုဟ်တို့က အသီးသီးအုပ်စိုးကြ၏ဟုဖော်ပြ ထားသည်။ ဝေဒပညာရပ်တွင် ဓာတ်ကြီးငါးပါးကိုသာ ဖော်ပြခဲ့သော်လည်း ဓာတ်ခြောက်ပါးရှိပုံကို ''ပဏ္ဍိတဝေဒနိယဒီပနီ ကျမ်း''တွင် ...
ပထ၀ီ၊ အာပေါစ တေဇောစ၊ ၀ါယော အာကာ - ၀ိညာဏိဒံ...
၁။ ပထ၀ီစ၊ မြေဟု ခေါ်ဆိုအပ်သော ပထ၀ီဓာတ်သည်လည်းကောင်း
၂။ အာပေါစ၊ ရေဟု ခေါ်ဆိုအပ်သော အာပေါဓာတ်သည်လည်းကောင်း
၃။ တေဇောစ၊ မီးဟု ခေါ်ဆိုအပ်သော တေဇောဓာတ်သည်လည်းကောင်း
၄။ ၀ါယောစ၊ လေဟု ခေါ်ဆိုအပ်သော ၀ါယောဓာတ်သည်လည်းကောင်း
၅။ အာကာသ၊ ကောင်းကင်ဟု ခေါ်ဆိုအပ်သော အာကာသဓာတ်သည်လည်းကောင်း
၆။ ၀ိညာဏဉ္စ၊ သိတတ်သောသဘောဟု ခေါ်ဆိုအပ်သော ၀ိညာဏဓာတ်သည်လည်းကောင်းရှိ၏ဟု ဖော်ပြပါသည်။
ဇောတိသဝေဒမဂ္ဂဇင်း အမှတ်(၁)တွင် တက္ကသိုလ်မင်းကျော်စွာက ...
တေဇော (မီးဓာတ်) ရာသီပရိယာယ်
(မိဿ၊ သိဟ်၊ ဓနု)
မီးဓာတ်ရာသီများသည် ပူပြင်းတောက်လောင်ခြင်း၊ လှုပ်ရှားတက်ြွကခြင်း၊ နှိပ်ကွပ်ဖျက်ဆီးခြင်း၊ လောင်ကျွမ်းခြင်း၊ ကျွမ်းဝင်နွေးထွေးခြင်း၊ နှစ်သက်လွယ်၊ စိတ်ဆိုးလွယ်ခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။ ဇာတာတစ်စောင်တွင် မီးဓာတ်ရာသီများအား ကောင်းပါက ဇာတာရှင်သည် လှုပ်ရှားတက်ြွကခြင်း၊ စိတ်ထက်သန်ခြင်း၊ စိတ်ဝင်စားမှုရှိခြင်း၊ ကျယ်လောင်စွာပြောဆိုတတ်သော သဘာဝရှိခြင်း၊ အာသာဆန္ဒပြင်းပြခြင်း၊ ရန်လိုခြင်း၊ တိုက်ခိုက်လိုသော သဘာဝရှိခြင်း၊ စိတ်တိုခြင်း၊ ပျော်ရွှင်စွာနေတတ်ခြင်း၊ ဟာသဥာဏ်ရှိခြင်း၊ စိတ်မြန်ကိုယ်မြန်ရှိခြင်း၊ အားကစားဝါသနာပါခြင်း၊ အလျင်စလိုပြုမူတတ်ခြင်းတို့ ရှိပါသည်။ မီးဓာတ်သဘာဝ အား ရေဓာတ်က ငြှိမ်းသတ်၏။ မြေဓာတ်က သမမျှတစေ၏။ လေဓာတ်က ပိုမိုတောက်လောင်မှုကို ဖြစ်စေပါသည်။
ပထ၀ီ (မြေဓာတ်) ရာသီပရိယာယ်
(ပြိဿ၊ ကန်၊ မကာရ)
မြေဓာတ်ရာသီများသည် ပြည့်ဝခြင်း၊ မှီခိုအားထားမှုကိုရစေခြင်း၊ တည်ငြိမ်ခြင်း၊ လှုပ်ရှားမှုမရှိခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေသည်။ ဇာတာတစ်စောင်တွင် မြေဓာတ်ရာသီများအားကောင်းပါက ဇာတာရှင်သည် တည်ငြိမ်ခြင်း၊ မှီခိုအားထားဖွယ်ဖြစ်ခြင်း၊ လက်တွေ့ ကျခြင်း၊ အပင်ပန်းခံနိုင်ခြင်း၊ ဇွဲရှိခြင်း၊ သည်းခံခြင်း၊ အသေးစိတ်ကျခြင်း၊ ဂရုစိုက်ခြင်း၊ လေးနက်ခြင်း သဘာဝတို့ရှိပါသည်။ မြေဓာတ်အားကောင်းသူများသည် ပစ္စည်းဥစ္စာဓနများကို ပိုင်ဆိုင်ရတတ်၏။ မြေဓာတ်သဘာဝအား လေဓာတ်က ခြောက်သွေ့ စေ၏။ မီးဓာတ်က ပူလောင်စေ၏။ သို့သော် ရေဓာတ်က လန်းဆန်းစေ၏။
၀ါယော (လေဓာတ်) ရာသီပရိယာယ်
(မေထုန်၊ တူ၊ ကုံ)
လေဓာတ်၏သဘာဝသည် သက်ရှိသတ္တ၀ါများ၏ အသက်ရှူရှိုက်မှုကိုဖြစ်စေသည်။ အသံလှိုင်းကို သယ်ဆောင်သည်။ လေမရှိပါက အသံကိုကြားရမည် မဟုတ်ပေ။ အသံကိုဖြစ်စေမည် မဟုတ်ပေ။ လေသည် အရာအားလုံးနှင့် ဆက်သွယ်လျက်ရှိ သည်။ ဟိုမှဒီသို့ ရွေ့လျားတိုက်ခတ်လျက်ရှိ၏။ သို့ဖြစ်၍ ဇာတာတစ်စောင်တွင် လေဓာတ်ရာသီများအားကောင်းပါက ဇာတာ ရှင်သည် ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမျိုးတွင် ကျွမ်းကျင်ခြင်း၊ အကြောင်းအကျိုး ရှင်းပြတတ်ခြင်း၊ အသိဥာဏ်ြွကယ်ဝခြင်း၊ စိတ်ကူး ဥာဏ်ကောင်းခြင်း သဘာဝတို့ရှိပါသည်။ လေသည် ပေါ့ပါးသောသဘောရှိ၍ မြေအောက်တွင်ရှိသော ရေနှင့်ဓာတ်မတည့်ပေ။ လေဓာတ်သည် မီးဓာတ်ကို ကြိုက်နှစ်သက်၏။
အာပေါ (ရေဓာတ်) ရာသီပရိယာယ်
(ကရကဋ်၊ ဗြိစ္ဆာ၊ မိန်)
ရေဓာတ်၏သဘောသည် အရောင်တုံ့ပြန်မှု၊ အရာဝတ္ထုများကို ပျော်ဝင်စေမှု၊ အညစ်အကြေးများကို သန့်စင်စေမှုနှင့် ကြီးထွားမှုကိုဖြစ်စေသည်။ ရေ၏မူလမျက်နှာပြင်သည် တည်ငြိမ်မှုရှိသော်လည်း မုန်တိုင်းကျသည့်အခါ လှိုင်းတံပိုးများဖြစ်စေ သည်။ ရေသည် ကိုယ်ပိုင်အရောင် အဆင်းအနံ့အရသာနှင့် ပုံသဏ္ဌာန်မရှိပေ။ ရေသည် ထည့်သည့်ခွက် ပစ္စည်း၏ပုံသဏ္ဌာန် အတိုင်းသာ တည်ရှိတတ်၏။ ဇာတာတစ်စောင်တွင် ရေဓာတ်ရာသီများ အားကောင်းပါက မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကြည်မှုနည်းသည်။ ထိလွယ် ခိုက်လွယ်သောစိတ်ရှိ၏။ ခံစားမှုလွယ်၏။ အနုပညာ၊ ဂီတစာပေကို ခုံမင်၏။ ရေဓာတ်အား မီးဓာတ်က ဆူပွက်စေ၏။ လေဓာတ်က လှုပ်ရှားထြွကလေ၏။ မြေဓာတ်က ထိန်းသိမ်းပေး၏။
Mathematics for the Million စာအုပ်တွင် ပိုက်သာဂိုးရပ်စ်၏အမြင်ကို အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြထားပါသည်။
စသည်ဖြငMathematics for the Million သင်္ချာစာအုပ်တွင် ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။
Posted by aha at 6:15 AM0comments